« Hebreo »
« Hebreo 5 [MDG - malagasy] »
5:1 Fa ny mpisoronabe rehetra dia alaina amin’ny olona ka tendrena ho solon’ny olona hanao ny raharahan’Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota,
5:2 "Dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany koa mba hodidinin’ny fahalemena ihany;"
5:3 Ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ota ho an’ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an’ny olona ihany.
5:4 Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an’ny tenany afa-tsy izay nantsoin’Andriamanitra, tahaka an’i Arona.
5:5 Dia toy izany koa Kristy: tsy Izy no nanandratra ny tenany ho Mpisoronabe fa Ilay nanao taminy hoe: “Zanako Ianao, Izaho niteraka Anao androany,”
5:6 Ary toy ny nolazainy eo amin’ny toerana hafa koa hoe: “Ianao no Mpisorona mandrakizay araka ny fanaon’i Melkizedeka.”
5:7 Tamin’ny andron’ny nofony, raha nanatitra vavaka sy fangatahana nomban’ny fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin’Izay nahavonjy Azy tamin’ny fahafatesana Izy, sady voahaino tamin’izay natahorany,
5:8 "Na dia Zanaka aza Izy, dia nianatra fankatoavana tamin’ny zavatra niaretany;"
5:9 Ary rehefa natao tanteraka Izy, dia tonga loharanon’ny famonjena mandrakizay ho an’izay rehetra mankatò Azy:
5:10 Fa notononin’Andriamanitra hoe Mpisoronabe “araka ny fanaon’i Melkizedeka”.
5:11 Ny amin’izany dia manana teny maro izahay sady sarotra ambara, satria hita fa lalodalovana ny sofinareo.
5:12 "Fa na dia tokony ho efa mpampianatra aza ianareo noho ny fahelan’ny andro, dia mbola mila izay hampianatra anareo ny abidim-pianaran’ny teny velona sy miasa an’Andriamanitra indray; ary efa toy izay tokony homen-dronono ianareo fa tsy hena mafy."
5:13 Fa izay rehetra mivelona amin’ny ronono dia tsy zatra amin’ny tenin’ny fahamarinana, satria mbola zazakely.
5:14 Fa ho an’izay efa lehibe ny hena mafy, dia ho an’izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy.
Bibles.mg 11 visiteurs connectéshttp://jesus.mg